गायक पशुपति शर्माले जवाफ दिनुपर्छ । – Namaste Filmy
गायक पशुपति शर्माले जवाफ दिनुपर्छ ।
भोजराज बिश्वकर्मा ।
[dropcap]के[/dropcap]हि दिनयता एउटा तिजको गीतलाई लिएर गरिएको बहस र रमिता हेर्दा लाग्दैछ, सम्पूर्ण दलित आन्दोलन यसैमा केन्द्रीत छ। अनि केहि दलित संघसंसथाको गतिविधि देख्दा यस्तो लाग्यो कि अब आन्दोलन र डलरको उपलब्धी तत्काल मिल्दैछ।
अनि पशुपति शर्मालाई जातीय विभेदको दूत बनाउने दौड चल्दैछ। म पनि एउटा लोक संगीतको पारखि भएको नाताले पशुपति शर्माको क्रियटिभिटीलाई सम्मान गर्छु। तर, यो बहसको मुद्दा हेर्दा एउटा गीत भित्रको शव्दलाई र यो बहस आइसकेपछाडिका तर्कवितर्क हेर्ने हो भने यीत प्रसस्त देखिन्छ। यदि सकिन्छ भने यी कुराहरुको पनि जवाफ पनि पाउन सकिन्थयो कि?
१)यहाँ बाहुन भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ भन्नेहरुलाई मेरो प्रश्न जुन शब्दसँग जोडिएर आजसम्म गर्व गरे अनि जुनशव्दसँग जोडेर आजसम्म एउटा मान्छे ,मान्छे हुन सकेन अनि त्यहिँ उदाहरण किमार्थ उचित हुन सक्दैन।
२) अनि महिला आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने पनि महिलालाई अब स्वास्नी मान्छे, आइमाई भन्न नपाउने व्यवस्था कानुनले गरेको अवस्थामा दलित महिलालाई कमिनि, दमिनि सर्किनि भन्ने छुट कसले दियो? यहाँ आत्मसम्मानको ख्याल गर्नु पर्दैन।
३) थर कामि, दमै, सार्कि हो अनि आफै विशेषण लगाएर कमिनि, दमिनि भन्ने ता कि कामी दमै भन्ने शव्द नै मन परेको हो भने कामिकि छोरी दमैकि छोरी भन्न सकिदैन?
४)अनि केहि समय यहिँ गीतको विषयलाई लिएर गैर दलित र आफूलाई कथित माथिल्लो जातका भन्नेहरुले गरेको तल्लो स्तरको टिका टिप्पणीको जवाफ पशुपति शर्माले दिनुपर्छ।
५)आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण भाग सांस्कृतिक आन्दोलन हो। अहिलेसम्म विभेदविरुद्धका गीतहरु नै बनेका छैनन्? जनवादी गायकहरुले अनि पछिल्लो समयमा राजु परियार, यसकुमारहरुले पनि गाएका छन्। गीत भन्ने कुरा सबैले पचाउने हुनुपर्छ समाजकै लागि गाएको हो भन्ने अनि आउन नपाउदै विरोध खेप्नु पर्ने भलै राम्रो मनसायले आयो होला आखिर विरोध त अयो नि त्यसलाई के भन्ने?
६) अनि समर्थनका नाममा विश्लेषण नै नगरी कामी र दमैका छोराछोरी हुनुमा गर्व छ भन्ने हरुले पनि बुझ्नु पर्यो यहाँ कसैले पनि ग्लानी गरेको छैन। तर, प्रवृति र नियत अनि भोगाइको परिणाम हो । गाउँबाट शहर पसेकाहरुले हल्ला गर्नुको कुने तुक छैन। पानी छोएको निहुँमा कुटिनु पर्ने अनि चुलो छोएको निहुँमा मर्नुृपर्ने, अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुँमा गाउँ निकाला हुनुपरेकाहरुलाई सोध गर्व छ कि के छ?
७ ) हामी गीत संगीतलाई माया गर्छौ अनि श्रष्टालाई सम्मान पनि गर्छौ। कामी दमैका छोराछोरी पनि संगीतको क्षेत्रमा प्रशस्तै भेटिन्छन् र उनीहरुले पनि भूमिका निर्वाह गरेकै छन्।
सत्य कुरा के चाहि हो भने वास्तविकता लुकाएर लुक्दैन र ढाट्नुपर्ने लुकाउनुपर्ने पनि केहि छैन। हाम्रा विषयमा हामलिे वोलेकै छौं। हामी बोल्न पनि सक्छौं र सबैको सहयोग पनि चाहिन्छ। तर, सहयोगको नाममा आत्मसम्मानमा सम्झौता हुन सक्दैन।
सम्झौता सहितको सहयोगको अर्थ पनि छैन। आफ्नो ठाउँवाट गर्नेकुरा छदैँछ तर गरिदिनका लागि गर्दिनपर्नेे छैन। जजसले जेजे टिप्पणी गरे पनि आएको असन्तुष्टिको चित्त बुझ्दो.जवाफ नआउन्जेल जवरजस्ती पचाउने काम होला तर जनवादी र परिवर्तनका लागि यो गित मान्न सकिदैन।
ताकि यसलाई गाइजात्रा मानेर सुनौला अनि तिजको रत्यौली भन्दा बढिको दर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन।
यस्तो थियो पशुपति शर्माको विवादास्पद नयाँ गीत :
'उत्सव' ट्रेलर रिलिज । युवाको कथा सबैलाई मनपर्यो ।